Maxaa kasoo baxay kulankii dhexmaray madaxweynaha Galmudug iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed? (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maxaa kasoo baxay kulankii dhexmaray madaxweynaha Galmudug iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed? (AKHRISO)
Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo haatan ku sugan magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa habeenkii xalay booqasho ku tagay guriga uu magaaladaasi ka degan yahay madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed oo haatan arrimo caafimaad ah u jooga magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa Sheekh Shariif kala hadlay arrimo ku saabsan xaalada uu haatan dalka maraayo, arrimaha maamulka Galmudug iyo sidoo kale ololaha doorashooyinka dalka oo ay haatan qeybtoodii hore bilawdeen.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa marka hore si aad ugu mahad celiyay booqashada uu madaxweyne Guuleed ugu yimid gurigiisa, waxaana uu Alle uga baryay inuu caafimaad deg deg ah siiyo.
Madaxweyne C/kariin Guuleed ayaa dhawaan qaliin dhinaca wadnaha ah looga sameeyay dalka Hindiya, waxaana markii uu dib ugu laabtay dalka Soomaaliya kusoo laba kacleeyay xanuunkii, isagoona xilligaasi kadib soo gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, si uu baaritaano dheeraad ah ugu sameeyo caafimaadkiisa.
Xiriirka u dhaxeeyay madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa sida la sheegay mudooyinkii dambe soo xumaaday, kadib markii uu madaxweyne Guuleed ka hor-yimid go’aankii laga soo saaray shirka madasha wadatashiga qaran ee dhawaantaan ka dhacay magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa dhawaan sheegay inuu u tartami doonno doorashada xilka madaxtinimo ee dhici doonta dabayaaqadda sanadkaan 2016-ka, inkastoo aan la ogeyn xilliga rasmiga ee uu ololihiisa doorasho ka dhex bilaabi doono gudaha dalka Soomaaliya.
Warar hoose aynu helnay ayaa sheegaya in madaxweyne C/kariin Guuleed uu madaxweyne Sheekh Shariif u balan qaaday inuu ka taageeri doono ololihiisa doorasho ee madaxtinimadda dalka, inkastoo la sheegayo inay socdaan dadaalo badan oo ku saabsan in isbehaysiyo siyaasadeed la sameeynayo kahor xilliga doorashada dalka.
Si kastaba ha ahaatee, booqashada uu madaxweyne Guuleed ku tagay guriga Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ku leeyahay magaalada Kampala ayaa kusoo beegmaysa xilli dhamaadka sanadkaan la rajeeynayo inay dalka Soomaaliya ka dhacdo doorashada xilka madaxtinimada Soomaaliya, iyadoona uu Sheekh Shariif ka mid yahay musharaxiinta ugu cad-cad doorashadaas.